Umlando - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
I-PHILFAST iyinhlangano eyodwa yokumisa umsebenzi wokukhiqiza ngogesi eChina. Unomlando ocebile wokukhiqiza kanye nomhlangano webhodi lesifunda. Ngosizo oluphelele, olusebenzayo nolusezingeni eliphakeme, i-PHILFAST inikeza amakhasimende izixazululo ze-EMS ezigculisayo, kusukela ekwakhiweni kwasekuqaleni kuya ekukhiqizweni kokugcina nasekuhlanganeni. Futhi ukuhlola, sihlala sisebenza kuwo wonke amakhasimende ngobuchwepheshe obuthuthukile, ulwazi lobuchwepheshe, uhlelo oluphelele lokuphatha, nomqondo wensizakalo wokugcina, silwela njalo ukwenza kahle, futhi sifaka isandla ekuthuthukisweni kwemboni yokukhiqiza kagesi ka-China!
Kusukela yasungulwa, inkampani ibilokhu ibeka ikhwalithi yomkhiqizo nokuhlinzekwa kwamakhasimende endaweni yokuqala, futhi ngasikhathi sinye, yakha uhlelo oluhle kakhulu lokunciphisa izindleko zamakhasimende, futhi iqeqesha ngokuqinile wonke umsebenzi. Ifilosofi yokuphatha idinga ukuthi wonke umsebenzi aqhubeke nokwenza ngcono futhi enze umsebenzi wakhe kahle, athuthuke futhi akhule ndawonye nenkampani.
Singahlangabezana nazo zonke izidingo kusuka ekwakhiweni, ekukhiqizeni, ekuhlanganeni nasezinhlelweni ekugcineni kokuhlolwa kokusebenza. Siphinde futhi sinikeze ngezinsizakalo ezigcwele nokusekelwa kwamaphrojekthi we-elekthronikhi.